သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်ချုပ်အပ် -> စက်ကို အပ်ချုပ်အပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စက်ကို အပ်ချုပ်အပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
စက် flatbed လူပျိုအပ်နဖားကိုအဘို့, သာမန်ပိတ်ထည်သို့မဟုတ်သားရေချုပ်များအတွက်သင့်လျော်မယ့်, Size ကို 18 # 11 #, 14 # ~ Size ကို9# စတာတွေ, လက်အိတ်, ကင်မရာအမှုများ, leatherette, ကစားစရာအရုပ်, ဖိနပ်, ခေါင်းအုံးနှင့်ကစားစရာအရုပ်ဖိနပ်ကိုတက်ချုပ်များအတွက်သင့်လျော်သည်ကိုနှစ်ချက်အပ်နဖားကို zigzag စလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်သို့မဟုတ် Pin-point ကောင်း၏ (အိပ်ရာ-မရှိခြင်း) စက်နှင့်တန်ဆာဆင်အပ်ဘောင်းဘီချုပ်များအတွက်သင့်လျော်မယ့်, သားသမီးများရဲ့ကျီနှင့်လက်အိတ်။ Size ကို 19 # ~ 24 # ကို Ultra မိုးသည်းထန်စွာသားရေချုပ်အဘို့အသင့်လျော်သည်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 1738; 287WH, 16X257, 16X231, 16X95, SY2254 ။
Size: 19/120 ~ 23/160
Equivalent Systems: 1738A, DBXA20, 16X95, 287WH
သော့ခတ်ချုပ်စ​​က်သည်ခပ်သိမ်းသောအရွယ်အစားချုပ်များအတွက်သင့်လျော်တူညီတဲ့ Shanks ၌ရှိကြ၏။ Alfa / Bernina / ကိုညီအစ်ကို / Cone / Feisul / ကျောက်မျက်ရတနာ / မစ်ဆူဘီရှီ / အဆိုတော် / Toyota ၏ / ဗိုက်ကင်း / Yalata: ဤအရည်အသွေးမြင့်မားတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များအပါအဝင်အပ်ချုပ်စ​​က်တွေအများအပြားမော်ဒယ်များ fit ပါလိမ့်မယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 1738A, DBXA20, 16X95, 287WH ။
flatbed သို့မဟုတ်သားရေအသုံးပြုမှုစက်အငယ်အဘို့အ Shanks, (သားရေအတွက်) လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြတ်တောက်ခြင်းပွိုင့်အပ်ချုပ်လက်အိတ်, ကင်မရာအမှုများနှင့် leatherette ကုန်စည်များအတွက်သင့်လျော်သည်, စသည်ဖြင့် Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 1738S ။
Machine Sewing Needles | Stretch Nadel Nähmaschine | иглы к швейным машинам | Agulhas para máquinas de costura | Tipi di Ago | मशीन सिलाई सुई | Aguja de Maquina de Coser | الإبر آلة الخياطة | Kim máy may | เครื่องเข็มเย็บผ้า | Jarum mesin jahit | মেশিন সেলাই সূঁচ | Makine Dikiş İğneleri | ម្ជុល​ដេរ​ម៉ាស៊ីន | စက်ကို အပ်ချုပ်အပ်နဖားကို	|job search